Mogadishu Journal » Dibadbax rabashado wata oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho
Dibadbax rabashado wata oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho
Mjournal :-Wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxaa inta badan xirey banaanbaxyo ay dhigayaan wadayaasha iyo milkiilayaasha Mooto Bajaajta iyagoo ka cabanayay in loo diiday lagana mamnuucay in ay kasoo gudbaan Laamiga Wadanaha halka horeyna loogu diiday in ay maraan Wadooyin kale oo kuyaala Muqdisho.
Banaanbaxa oo ka bilowday taalada Daljirka Dahsoon ayaa ku sii fidey wadooyinka kale ee waaweyn iyadoo wadooyinka ay haatan xirmeen.
Qaar kamid ah Wadayaasha Mooto bajaajta ayaa sheegay in markii hore dhibaato kala kulmayeen wadooyinka jid cayaasha xiran iyo ciidamada amaanka ee ku sugan koontaroolada, waxa ayna tilmaameen in hadana ugu darsantay xanibaadan cusub ee lagu soo rogay.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa wada dadaalo uu ku doonayo in lagu qaboojiyo xiisada ka dhalatay carada ay soo bandhigeen wadayaasha iyo milkiilayaasha mooto bajaajta.
Mootooyinka Bajaajta ayaa magaalada Muqdisho sanadihi la soo dhaafay ku soo badanayay iyadoo dadku inta badan ay adeegsadaan waxana ay suuqa ka saareen gaadiidkii kale ee basaska ahaa ee dadka ay raaci jireen, iyadoo kumanaan dhalinyaro ah ay ka heleen fursado shaqo.
Shacaka Kenya oo maanta codadkooda dhiibanaya doorashada madaxtinimada dalkaas